Maxaabiis loo haysto burcad badeednimo oo Muqdisho laga soo dejiyay - Jowhar somali news leader
Home NEWS Maxaabiis loo haysto burcad badeednimo oo Muqdisho laga soo dejiyay
Maxaabiis loo haysto dambiyo la xiriira burcad badeed ayaa maanta laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho kadib markii laga soo wareejiyay xabsi ku yaal magaalada Garowe.
Maxaabiistan oo tiradoodu gaareysa 14 Maxaabuus ayaa ah kuwo lagu soo xukumay dalka Seycheles iyagoo muddo ku xirnaa xabsiga weyn ee magaalada Garoowe.
Wasiirka Cadaaladda Puntland Cawil Sheekh Xaamid ayaa Maxaabiista ayaa maanta maxaabiista ku wareejiyay Wasiirka Cadaaladda Xukuumadda federalka Soomaaliya Cabduqaadir Maxamuud Nuur Jaamac.
“Waxaan maanta xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho u soo wareejiney 14 maxbuus oo in mudo ah ku xirnaa xabsiga Garoowe si eheladooda loogu soo dhoweeyo.Waxaan u mahad celinayaa Wasaaradda Cadaaladda dowlad goboleedka Puntland iyo dhamaan bahda Cadaaladda ee labada heer” ayuu yiri Wasiir Cabduqaadir Maxamuud.
Maamulka Puntland iyo dowladda Seychelles ayaa dhawaan ku heshiiyay in Maxaabiista ku xukuman burcad-badeednimada ee ku xiran xabsiga Garoowe loo wareejiyo Muqdisho, kuwaasi oo kasoo jeeda degaannada Galmudug.
Previous articleIsrael says it will work closely with the United States on any new Iran nuclear deal
Next articleTallaalka Covid 19 ee lagu farsameeyay Shiinaha oo Muqdisho la keenay